Yedu Dental Technology | OptiSmile ™ Yepamberi Dentistry
Yedu tsika ine akashongedzerwa neakanakisa ekurapa uye ekuongorora tekinoroji pasirese, zvinoreva zvisingaenzaniswi mazino ekurapa kwako kwese mazino ekurapa, kubva pane yakapusa maitiro kusvika kune epamberi.
Yedu Inoshamisa Mazino Technology
Chaizvoizvo inogona kushanda, asi kune zviripo zvakanyanya kukodzera uye zvemberi zvigadzirwa zvakagadzirwa kuti zviite basa zvine hungwaru kuti uwane mhedzisiro yakakwana. Izvo zvakafanana nekurapa mazino. Kurapa kwechikoro chekare-chikoro kunoshanda, asi usatore mhedzisiro yaunoda nenzira inoshanda uye inoshanda. OptiSmile inopa chete yemhando yepamusoro mu micro-dentistry uye unotenda kuti izvi zvinofambidzana neazvino muzvigadzirwa zvemazino zvepamusoro-soro.
Invisalign Bvisa Orthodontics
Masimbi esimbi chinhu chekare. Tsvaga kuti aya akajeka, anoraswa mabhureki anogona sei kunyatso shandura kunyemwerera kwako. Tine Invisalign nyanzvi imo muno muCape Town.
Zvizhinji nezve Invisalign
Komputa yakabatsira kugadzirwa kweceramic inlays, veneers, mabhiriji uye implant, zvese mukushanya kumwe. Tsvaga kuti yedu CAD / CAM tekinoroji inoshanda sei kugadzirisa patsva meno ako.
Kutya majekiseni uye kurwadziwa ndiyo nhamba yekutanga kutya kwevanhu vanoshanyira chiremba wemazino. Iyo inodzungaira wand inoita zvishoma inokonzeresa, inowanikwa munzvimbo mazino anesthesia chaicho.
Siya chero molar isina kuchinjwa. Iyo Orthophos 3D X-ray inogadzira yakanyatsojeka mifananidzo ye3D yemuromo wako kutibatsira kuona chero matambudziko emazino.
Iwo anotenderera royce mamaikorosikopu. KuOptiSmile, isu tinoita kunyange edu ekuchenesa mazino pa6x kukudzwa kuti tirege kupotsa chinhu. Tsvaga zvimwe nezve edu maikorosikopu.
Tsvaga chaizvo zvauri kuda chero basa remazino risati ratanga. Kutenda nehunyanzvi hweCAD CAM tekinoroji, Dhijitari yekunyemwerera Dhizaini inokutendera iwe kuve mushandirapamwe wekunyemwerera kwako kutsva, kudzamara kune yekupedzisira nhoroondo.
Laser redu rakasarudzika rinovhenekera chero mhango dzakavanzwa pasi peiyo enamel, kana mune yakaoma kuona maokoni nemakwenzi emuromo wako. Tsvaga kuti zvinoshanda sei.
Unonetseka nezvemari? Yemaitiro asina kunyatso kufushirwa neyekurapa rubatsiro, pane huwandu hwe mazino emari sarudzo kubatsira kuita kuti mari yako mumeno ako igoneke.
OptiSmile ndiye akachena kwazvo, ane hushamwari uye chiremba wemazino wehi-tech wandati ndamboona. Ndakauya kuzotsvaira uye sevhisi yaive yechipiri kune imwe. Yakakurudzirwa!
Ini ndakakundwa ne "kutsemuka kunyemwerera, kwete zino" Instagram bio uye ipapo ini ndakasvika pane imwe nzvimbo ine mamiriro ehunyanzvi tech, kuongororwa kwakapfava uye kugamuchirwa kwechokwadi. Iyi combo inoita Optismile nzira yakatemwa pamusoro pevamwe.
Kufara nebasa redu?
Ndokumbira utitaurire nezvazvo nekusiya wongororo.
Kubva ku Shoko Remuromo Blog
Sealants Dental Anogona Sei Kudzivirira Kuora Kwemeno
OptiSmile Yepamberi Dentistry muGungwa Point inotenda mukutsvaira zuva nezuva uye kukwiza maruva kubatsira kubvisa zvidimbu zvekudya uye mabhakitiriya kudzivirira mazino ako uye matadza.
Nyemwerera Matipi Batsira Kuwana Akanaka Kutarisa Mazino
Kuva nemazino akanaka anotaridzika anoita kuti iwe ude kunyemwerera zviri nyore kupfuura iwe zvaunofunga! Kuchengetwa kwakanaka kwemuromo: Kutanga, hutsanana hwemuromo hwakakosha. A
Tora Zviri Nani Kuchengeta Kwemeno Ako! Kubhururuka kaviri pazuva hakuna kukwana zvakare kana chinangwa chako chiri chekuchengetedza mazino ako mune akakwana mamiriro.